Mayelana nathi | Shenjiang
I-Guangdong Shenjiang Intelligent Technology Co., Ltd ingumkhiqizi ochwepheshe wemishini yezezimali yasebhange, etholakala e-Guangdong, eChina. Sigxila emshinini wediphozithi yemali, umshini wokuhlunga imali yemali ebhalwe phansi kanye nezingxenye ze-ATM.
Samukela i-OEM noma i-ODM, izokuhambisa kuyo yonke inqubo yokudala isixazululo, kusukela ekuxhumaneni ngaphambi kokuthengisa, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthunyelwa kuya ekufakweni. Ukukunikeza izixazululo zokuphatha ukheshi ezichwepheshile umuntu ngamunye, Yehlisa izindleko futhi wandise izinzuzo kumakhasimende, kuyilapho uhlinzeka ngesevisi esebenza kahle nenesibopho emva kokuthengisa.
Ezamabhizinisi: Khonza amakhasimende ngobuqotho futhi uzuze wena ngekhwalithi
Isiqubulo sebhizinisi: emisha, ubuqotho, uthando, ukubambisana.
Amanani ebhizinisi:Khonza wonke amakhasimende kahle, wenze wonke umsebenzi ube yimpumelelo
Umgomo: Iba umholi wemakethe yomhlaba wonke emshinini wokufaka imali kanye nezixazululo zezezimali zomshini.
Yini esingakunikeza yona?
Sine-R esezingeni eliphezulu&D kanye nethimba lonjiniyela bemishini nabasebenza ngogesi.
Isitifiketi Sethu Sokuhlonishwa
Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle. Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.